पत्रकार रवि लामिछाने टिम आफ्नै टिभिबाट आउने कार्यʼक्रमको तयारीको लागि लागे प्रदेश १ तर्फ-हेर्नुहोस् (भिʼडियो सहित) – Ap Nepal
पत्रकार रवि लामिछाने टिम आफ्नै टिभिबाट आउने कार्यʼक्रमको तयारीको लागि लागे प्रदेश १ तर्फ-हेर्नुहोस् (भिʼडियो सहित)
५ सेप्टेम्बर सन् १९७४ मा भक्तपुरको बागेश्वरीमा जन्मिएका रवि लामिछाने किशोरावस्थामै कार्यक्रम चलाउँथे । दाजु हरिशरण लामिछाने रेडियो नेपालका समाचारवाचक हुनुले उनमा आवा’जको दुनियाँमा काम गर्ने प्रेरणा मिलेको थियो । तर, उनी देशभित्र लामो समय बसेनन् । मिडियामा काम गरिसकेका उनी मिडियामै काम गर्नेगरी स्वदेश फर्किए ।
गिनिज बुकमा नाम लेखाउने देखि जनता’को सम’स्या उठाएर चर्चामा आए । चर्चासँग पटक पटक वि’वादमा आएका उनी हि’रासतसम्म पुगेर धरौ’टीमा रिहा भए । उनको आरोह र अवरो’हले भरिएको जीवन यस्तो छः
रवि लामि’छानेले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा भृ’कुटी माध्यमिक विद्यालयबाट लिए । एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका उनी प्रतिभाशाली छात्रका रुपमा चिनिन्थे । विद्यालय जीवनमा सा’हित्य र कलामा समेत लागेका थिए । विद्यालय जीवनप’छि उच्च अध्ययनको लागि रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा भ:र्ना भएका थिए । तर, आइएभन्दा माथिको अध्ययन गर्न सकेनन् । त्यसपछि उनी अमे:रिका बसाईँ सरे । संयुक्त राज्य अमेरिकाको बसाईमा फास्ट–फूड चेन जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा व्यवस्थापकको रूपमा काम गरे । बोल्न सिपालु र आ:कर्षक जीउडा:लका उनी त्यहाँ पनि नेपालीहरुमाझ लोकप्रीय थिए ।
रवि लामिछा’नेको व्यक्तिगत जीवन’का सुख दुः-ख उत्तिकै रोचक छ । विद्यालय जीवनमै प्रेममा परेका थिए लामि’छाने । उनले आफ्नै स्कुल जीवनकी प्रेमिका इशा लामिछानेसँग किशोरावस्थामै विवा’ह गरेका थिए । उनीहरुका दुई छो’री पनि छन् । सन् २०१८ मा उनीहरुले २५ वर्षको वैवाहिक सम्बन्धको अन्त्य गरे । यस’ले निकै चर्चा पायो । रवि र इशाबीच मिडियामा जुहारी जस्तै पर्यो ।
सँगै जिउन कसम खाएको जोडीले २५ वर्षको वैवाहिक जीवन अन्त गर्नुमा एक अर्कालाई दो’षी देखाए । रवि स्वेदश फर्किए, इशा अमेरिकामै बसिन् । रविसँग अमेरिकाको ग्रीनकार्ड भएको विषय बाहिर समेत आएको थियो । तर, उनले पछि ग्रीनकार्ड त्या’गेको घोषणा गरे । उनी सन् २००७ देखि २०१७ सम्म अमेरिकी नागरिक रहेको तथ्य भेटिन्छ । एक दशक अमेरिका बसाईँपछि फर्किएपनि उनले ग्रीनकार्ड छाडेका थिएनन् । यो विषय बाहिर आएपछि उनले ग्रीनकार्ड त्या’गेको घोषणा गर्दै नेपाली हरियो पासपोर्टमा विदेश यात्रा गरेको सार्वजनिक गरेका थिए ।
२०१९ मा रविले चलचित्र वि-कास बोर्डकी पहिलो महिला अध्यक्ष निकिता पौडेलसँग विवाह गरे । निकिता पनि पा’रपाचुके गरेर बसेकी थिइन् । उनको पनि छोरी छिन् । दुवैज-नाले मन मिलेपछि विवा:ह गरेका थिए । दुवैले अदा;लती विवाह दर्ता गरी हिन्दु परम्परा अनुसार विवाह गरे । यो विवाह नेपालमा भएको चर्चित विवाह-मध्येको हो । निकिता चलचित्र निर्माता तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता उद्धव पौडेल:की छोरी भए;कीले पनि विवाहले चर्चा पायो ।
रवि लामिछाने जो’खिम मोल्ने सेलि’ब्रिटी हुन् । उनले २०१३ अप्रिल ११ देखि १४ सम्म टिभीमा लगातार ६२ घण्टा १२ मिनेट टक शो चलाएर विश्वमै सबैभन्दा’ लामो समय कार्य’क्रम प्रस्तुत गरेर गिनिज बुक’मा नाम लेखाए । बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल शिर्ष:कमा टक शो चला’एर रवि चर्चामा आए ।
सिधा कुरा प्रधान:मन्त्रीसँग चलाएर चर्चा बटुलि:सकेका उनलाई गिनिज बुकमा नाम लेखाउने टक शोले लोकप्रीय बनायो । त्यसपछि सिधा कुरा जनतासँग कार्य:क्रमले लोकप्री:यताको शिख:रमा पुर्यायो । चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने न्यूज २४ टेलिभि:जनमा अन्तिम कार्यक्रम गर्दै विदा भएका छन् । सो टेलिभिजनमा ‘सिधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चलाउँदै आएका उनी आज अन्तिम कार्यक्रम गरेर बिदा भएका हुन ।
जाँदाजाँदै उनले ५ वर्ष काम गरेको सं’स्था छोड्नु पर्दा दु-ख लागेको बताएका छन र आफ्नो अन्तिम कार्यक्र:मको अन्तिम र मुख्य रिपोर्टमा नै कैचि लागेको बता’एका छन । आज फेसबुकमा एक स्ट्याटस पोष्ट गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन । उनले फेसबुकमा लेखेका छन,- “दु-ख लाग्यो…५ वर्ष काम गरेको संस्था छो’ड्नु पर्दा दु-ख लाग्यो।
अन्तिम कार्यक्रम Live गर्न नपाउ’दा दु-ख लाग्यो, अन्तिम कार्यक्रमको अन्तिम र मुख्य रिपोर्ट नै का,टिएकोमा झन दु-ख ला’ग्यो। हाम्रो टिमले तयार पारेको अन्तिम रिपोर्टमा के थियो त जुन प्रशारण गरिएन? त्यो सामग्री पोष्ट गर्दैछु।” त्यस्तै जाँ’दाजाँदै उनले सञ्चारमाध्यममा बोल्दै आफू देशको लागी प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएको बताएका छन ।
बहुचर्चित कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संगका प्रस्तो:ता रबि लामिछानेले न्युज २४ छोडेको अनौप’चारिक घोषणा गरेका छन् । “जन्ताको चासो गुनासोका साथै आवाज बिहिन को दरिलो आवाज बन्दै आएको सिधाकुरा जनता संग को लोक’प्रिय कार्यक्र’म धेरैको लागि अभिभावक बानेको थियो लाखौं श्रोताले मन पराएको सिधा कुरा जनता संग शुक्र’बारको अन्तिम कार्य’क्रम रहने छ।
कुरा” बन्द भएपछि लाखौं श्रोता’हरु लाई अब आउने कार्यक्रम का बारेमा खुल्दुली लाग्नु सोभाविक हो। वहाँले बताए अनुसार अब आउने कार्यक्रम झन बलियो र दरिलो र ससक्त हुने जान’कारी दिनु भएको छ।यद्यपि नया कार्यक्रम बारे केही खुलाउनु भएको छैन।
उनले नयाँ टिभि खोल्ने बारेको भिडियो यहाँ तल थिचेर भिडि’यो हेर्नुहोस…
Nextअचान’क छोरीको मोʼ बाईल हेर्दा आमाबुबाको होस उड्यो ,यसबाट सबै जना सचेत रहनुहोला
आजको राशिफलः बि.स.२०७७ साल माघ १३ गते मंगलबार इश्वी सन २०२१ जनवरी २६
२२ बर्षमै १० कक्षासम्म पढाउने यति राम्री शि,क्षिका । सबैलाई चकित पार्ने जादुमय स्वर, धु;रुधुरु रोईन् (भि’ डियो हेर्नुस)
सुनको गरगहना जोड्ने सोचमा हुनुन्छ? आज पनि घट्यो सुनको मुल्य